Apple Inotenga 'Big Man paCampus' Zvinyorwa Nezve Basketball Star Makur Muiti | IPhone nhau
Zhizha rave kusvika uye mwaka urikuswederawo apo isu pamwe tichakwanisa kunakidzwa yakawanda yemahara nguva. Nei usingafarire audiovisual catalog yekumhanyisa vhidhiyo mapuratifomu? Nhasi Apple ichangoburitsa kutengwa kwechinyorwa chitsva cheApple TV +, uye ndezvekuti zvinyorwa zviri kuwedzera kufarirwa. Munguva pfupi inotevera tichakwanisa kuona Big Man paCampus, iyo nyowani Apple TV + nyaya yakanangana neNBA nyeredzi Makur Maker.
Sezvatinokuudza, Apple yakangosimbisa kutengwa kwe Murume Mukuru paCampus chinyorwa chakateedzana chakatungamirwa naSeth Gordon chinotiunzira nyaya yeMakur Muiti. Kune avo vasingamuzive, Makur Maker inyanzvi yeNBA iyo mu2020 yakasarudza kutamba basketball kutsigira shanduko dzedzinza dzakaitika mukati megore rapfuura.
"Big Man paCampus" inyaya yenguva yenhoroondo muAmerica yakataurwa kuburikidza nechiono chemutambi wechidiki ane simba rekugadzira shanduko. Mu2020, gore rakaratidzirwa nemhirizhonga yemagariro, iyo basketball sensation, iyo NBA hiatus, uye iyo yepamusoro NCAA sarudzo, Makur Muiti, akaita danho rinotyisa rekutamba koreji basketball yeWoward University mukutsigira Nhoroondo Dema Makoreji neMayunivhesiti pane kujoina imwe yeakawanda epamusoro-tier mapurogiramu anokupa iwe basa rakazara. Kuenzanisa kumanikidza kusinganzwisisike zvese zviri zviviri uye kubva pasi, uye nemeso enyika akatarisa pane zvese zvaaiita, rwendo rweMaker - kubva pakutiza yakadzvanywa nehondo kuSouth Sudan achiri mudiki kufambiro yaakatanga nhasi - yaisa kumeso kumatongerwo enyika eAmerica. panguva iyi isina kumboitika.
Sezvauri kuona, irworwo rugwaro rwezvinangwa, Apple inotevera nzira yakaratidzirwa pazviitiko zvakapfuura zvekuzvipira kwayo munharaunda, uye nhasi nyaya yemaitiro aya ndiyo yakanyanya kunaka yavanogona kutanga. Iko hakuna zuva rekuburitsa parizvino asi tikangozviziva isu tinokusiira iwe mune imwe posvo. Uye newe, Iwe uri wakawanda wezvinyorwa kana fungidziro?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Apple inotenga 'Big Man paCampus' zvinyorwa nezvebasketball nyeredzi Makur Maker
Nekuburitswa kweIOS 14.5.1 Apple kusaina iOS 14.4.2